Ukuzingenela ngokwakho★ Ikhitshi le-wifi★ ekhawulezayo - I-Airbnb
Ukuzingenela ngokwakho★ Ikhitshi le-wifi★ ekhawulezayo
Igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle yonke sinombuki zindwendwe onguLan Anh
ULan Anh yi-Superhost
Isanda kulungiswa (ngoFebruwari 2022)! Bhukisha le ndawo uze wonwabele indawo yokuhlala etofotofo ene-AC & heating, umatrasi owenziwe nge-memory foam, i-smart TV kunye neNetflix, ikhitshi elinezixhobo ezininzi zombane, amanzi okusela asimahla nokunye! Kufuphi neendawo ezintle zokutya kwasesitratweni, unokonwabela ukutya okumnandi kumgama wokuba ungahamba ngeenyawo ngaphandle kokukhathazeka ngeendleko
Intsapho yethu ilungiselela amagumbi akho ngezinto zebhedi ezicocekileyo, iitawuli kunye nemigangatho ephezulu yococeko. Yonwabela iHanoi njengomkhenkethi nomntu wasekuhlaleni kunye nathi!
Balaselisa izinto/ iingenelo/izinto onokuzisebenzisa
- Umatrasi omfumamfuma - Umatrasi omkhulu weOlimpiki onezinto zebhedi ezicocekileyo neetawuli qho kuza kuhlalwa
- I-wifi YASIMAHLA -
I-SELF-CHECKIN EBHETYEBHETYE - kulula ibe kulula!
- INKXASO efumaneka imini nobusuku efowunini nasemntwini xa kuyimfuneko! Impendulo esemagqabini kwiingxangxasi ze-Airbnb
- iti YASIMAHLA/ ikofu
- Ukusela okungabhatalelwayo nokutsha (okucociweyo) amanzi
- INKONZO YOKUHLAMBA IMPAHLA YASIMAHLA kunye NOKUCOCA VEKI NGANYE xa kuza kuhlalwa iintsuku eziyi-7nangaphezulu (Nceda ubone iinkcukacha ezingakumbi kumagqabi akwigumbi lakho). Indawo yokuhlamba iimpahla efumanekayo xa kuza kuhlalwa ixesha elifutshane (ngaphantsi kweentsuku eziyi-7) qho ngoMvulo nangoLwesine nge-1.5 $/nanini na
- i-noodle YASIMAHLA -
Imephu yasekuhlaleni yokutya okumnandi kwasesitratweni, iivenkile ezifanelekileyo kunye nezinye iindawo eziphawulekayo onokuzidinga ngexesha lokuhlala kwakho.
UHanoiwagen uthatha umphantsi wokuqala wendlu yethu enomgangatho oyi-3 eyakhiwe ngo-1960. Yisitudiyo sabucala sondwendwe (segumbi lokulala nelokuhlala) esinendawo YOKUNGENA ESECALENI nendawo yokutshixa. Iindwendwe zinekhitshi nendawo yokuhlambela kumgangatho omnye. Hlala nathi uze ufumane eyona nkathalo isemagqabini kwintsapho yasekuhlaleni - ngokungathi zizilwanyana zethu:) - ngoxa yonke into yakho iyimfihlo ibe yenza izinto zakho zibe lula!
Sikwijelo lonxibelelwano phantsi kwegama elithi “Hanoi Homestay” ukuze sitshintshe izinto ezintsha, amatheko, izaphulelo ezifumaneka kube kanye ngamaxesha athile, igalari yeendwendwe kunye namacebiso okuhamba ngeHanoi.
Eli khaya likwicala lasekuhlaleni lesixeko elinamaxabiso aphantsi KAKHULU okutya neenkonzo zemihla ngemihla. Ukuba udiniwe bubomi obunabantu abaninzi nengxolo e-Old Quarter kodwa ufuna ukuhlala kwindawo enabantu abaninzi esixekweni, le yindawo ekulungeleyo. Kuthatha imizuzu eyi-15 ukuya kweyi-20 iteksi ($ 2-3 nge-app Yokubamba - i-app yasekuhlaleni efana ne-Uber) ukuya kwiindawo zokukhenketha e-Old Quarter...
Ukukhwela imizuzu eyi-5 ukuya kweyi-10 ukuya kwiMyuziyam yaseVietnam ye-Ethnology, iVenkile yeLotte, i-Indochina Plaza
- imizuzu eyi-20 yokuhamba ukuya kwiTempile Yeencwadi, icawa yaseSt Joseph, isikhululo sikaloliwe, ezinye iindawo e-Old Quarter
- imizuzu eyi-5 ukuya kweyi-10 iteksi kwiMyuziyam ye-Etnology, iLotte Department Store, i-Indochina Plaza,...
- imizuzu eyi-30 ukuya kwisikhululo seenqwelo-moya
Le ndawo ipholile kwaye ikhuselekile kuba ingummelwane weNational Military Academy (isikolo sokuqeqeshwa samagosa karhulumente kunye namalungu amagunya).
Abantu kule ndawo banobubele ibe banceda. Abantwana abakule ndawo bayakuvuyela ukudibana nabantu basemzini :)
Umbuki zindwendwe ngu- Lan Anh
Abazali bam bahlala kumgangatho ongasentla kodwa unendawo yakho yokungena nezitshixo. Zikhona nanini na ufuna uncedo kwaye sikunceda ugcwalise iti nekofu yakho, okanye sikuncede ufumane esinye isicelo sakho. Usezandleni ezilungileyo ngoxa uhlala nathi njengekhaya lakho lesibini elikude nekhaya :)
Abazali bam bahlala kumgangatho ongasentla kodwa unendawo yakho yokungena nezitshixo. Zikhona nanini na ufuna uncedo kwaye sikunceda ugcwalise iti nekofu yakho, okanye sikuncede uf…